आज नेपाल बन्द, कस्तो छ बन्दको प्रभाव ?
ARCHIVE, SPECIAL » आज नेपाल बन्द, कस्तो छ बन्दको प्रभाव ?
काठमाडौँ - स्थानीय तहको निर्वाचन असफल बनाउने उद्घोष गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आज बैसाख ३० गते शनिबार नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्ने उदेश्यले बन्दको आयोजना गरेको नेकपाले यसअघि नै ३० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो ।
यस्तो छ प्रभाव :
शनिबार विहान अर्थसरोकारकर्मी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा घुम्दा बन्दको प्रभाव देखिएको छ। खास गाडीहरु नचल्दा बाटो सुनसान देखिएका छन् । बन्दले उपत्यकाबाहिर समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ । मतदान गर्न गाउँ जानेहरु मर्कामा परेका छन् ।
यसैबीच बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस गरेको नेकपाले शनिबारपनि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको छ । विभिन्न ठाउँमा तोडफोड समेत भएको छ ।